Home News Jim Mattis oo si deg deg ah isku casilay
Jim Mattis oo si deg deg ah isku casilay
Xoghayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inuu shaqada ka tagayo bisha February.
Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Tweeter-ka soo dhigey inuu howl-gab noqonayo Gen. Mattis bisha February ee sanadka dhalanaya.
Balse Gen. Mattis ayaa qoraal uu soo saarey ku sheegay inuu shaqada uga tagayo ka dib markii ay isku aragti noqon waayeen Madaxweynaha, Arrintan waxa ay ku soo beegmeysaa xili la isku mari la’yahay miisaaniyadda dowladda.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa wajahaya Caddaadis xooggan oo kaga imaanaya xildhibaanada Mareykanka,taasoo ka dhalatay Markii uu sheegay in ciidanka Mareykanka ay kasoo bixi doonaan gudaha Suuriya.
Previous articleMadaxweyne Cagjar iyo Muuse Biixi oo ku kulmaya Xog-wajaale
Next articleDowlada Soomaaliya oo sheegtay in Daacish kusoo xoogeeysatay Magaalooyin dhowr ah
Weerar culus oo laga fuliyey deegaano Al-Shabaab ku sugnaayeen
Warar kala duwan oo kasoo baxaya Dil naxdinleh oo Marko ka...